Ekpere nye Santa Barbara. ? Maka Ego, Ịhụnanya na Nchedo.
Ekpere Santa Barbara. Nhụjuanya n'etiti ụmụ nwanyị ndị ọzọ nke ala Santa Barbara kwesịrị ka anyị nwee nkwanye ùgwù n'ihi na ọ hụrụ asị nke onye kwesịrị ịhụ ya n'anya. Bulie otu kpee Santa Barbara O nwere ike inyere anyị aka n'ọtụtụ oge na ọbụlagodi ndị anyị enweghị olileanya.
Ndụ ya n’elu ụwa okwukwe jupụtara n’ihe mgbu na ahụhụ, ka dịgidere n’agha site na ịlụ ọgụ nke ya ma na agbanyeghị na onye iro ya meriri na nso nso a, ọ ruru okpueze nke ịga nke ekwere ndị nsọ kwesịrị ntụkwasị obi nkwa Ha ji obi ọgụ.
Nwanyị nke okwukwe na-adịghị agbanwe agbanwe, onye siri ike, kwesịrị ntụkwasị obi na onye enyemaka anyị n'oge nhụjuanya.
1 Ekpere Santa Barbara
1.1 Ekpere Santa Barbara maka ego
1.2 Ekpere Saint Barbara gọziri maka ịhụnanya
1.3 Ekpere Saint Barbara gọziri maka nchebe
1.4 Maka ndi iro
1.5 Dominchịkwa onye mmekọ na-ekwesịghị ntụkwasị obi
O biri n'ụwa n'oge narị afọ nke atọ na Asia Minor.
Na ndu ya ọ tara ahụhụ dị ukwuu n'ihi nkwenkwe okpukpe ya ebe ọ bụ na ha megidere nke ezinụlọ ya. Akụkọ ihe mere eme na-ekwu na nna ya bụ onye iro siri ike nke Iso atzọ Kraịst n’oge ahụ, okpukperechi Barbara kwupụtara n’efu.
Ọ bụ ya, Dioscoro, nna ya, kpọchiri ya n'ụlọ elu dị elu ka ọ bụrụ ntaramahụhụ maka ọdịiche okpukpe ya.
N’oge a na-akpọchi ya anya, o kwesịrị ntụkwasị obi na okwukwe ya, na-eme ya baptizim ma na-ekwusa okpukpe ya oge niile.
Ekwuru na ụlọ elu nwere naanị otu windo na o nyere iwu abụọ ọzọ oghe dị ka ihe nnọchianya nke Chi dị n’otu.
Mgbe nna ya laghachiri, ọ nwalere ya ma nata mmekpa ahụ na mmechuihu na ọ bụ Dioscoro n'onwe ya ji mma agha ya gbue isi ya n'elu ugwu. Ọ bụ kwuru na mgbe ogbugbu a a ụzarị igwe si n'eluigwe tiri ya gburu ya.
Ekpere Santa Barbara maka ego
Santa Barbara dị ike, onye na-alụ ọgụ, na-enyere m aka imeri n'ọgụ a.
Gị onye daba na ọnwụnwa nke ihe ọjọọ, gị onye jiri ịhụnanya gị kwuo, ahụhụ niile, na-apụta na-enwe mmeri, m na-arịọ gị ịrịọ Chineke, Onye-nwe-anyị, ka o nyere m aka ịnagide oge a ọ na-ele m ule.
Mee ka m, site na nnukwu ulo ya nye m ike ezu ebe ihe ọma ga-abụ onye mmeri.
(Mee akpa gị ego)
Onye-nwe, na i nyere Santa Barbara ike dị egwu iji guzogide iwe na ahụhụ kachasị ukwuu maka ikwesị ntụkwasị obi nye Gị, anyị na-arịọ na, dịka ya, anyị siri ike na mmekpa ahụ na ịdị umeala n’obi na ịba ụba iji nweta dịka ọ eternalụ nke ebighi-ebi ya.
Site na Jisos Kraist Onye nwe anyi.
(mee Ego nke Abụọ)
Gọziri agọzi Barbara, bụ onye ji purpura ọbara gị dinaa n'ịnyịnya ọcha gị maka ịhụ Jehova n'anya, gbachitere m n'oké ifufe, ọkụ, ọdachi na mbibi niile nke ụwa a.
Anapụta m ọnwụ na mberede. Arịọchitere m Dinwenụ ka o nyere m aka inweta ọganiihu na ndụ a, ibi na ọbụbụenyi dị nsọ ma rute na njedebe nke ụbọchị m n’udo na amara ya.
(na-arịọ arịrịọ ego nke atọ gị)
Ekpere Santa Barbara a maka ego siri ezigbo ike!
Ọ kuziiri anyị ịdabere na Chineke, ikwere na nkwa ya emezuwo na ibi ọtụtụ ihe na nta. Nwanyị onye daa ogbenye O nwere ike inyere anyị aka ịba ọgaranya.
Ikpe ekpere ka ego bịakwute anyị n’oge nsogbu a dị mkpa ma rịọ maka Santa Barbara n’okwukwe bụ nrube isi nke anyị kwesịrị ime kwa ụbọchị.
Enwere mme akam m̀m or akam Ha nwere ike iduzi anyị ka anyị jụọ n'ụzọ ziri ezi. Agbanyeghị, ihe dị mkpa na naanị nkwa anyị nwere ịmara na a nụrụ ekpere anyị bụ ka okwukwe ahụ dịrị ndụ.
Ekpere Saint Barbara gọziri maka ịhụnanya
Dike nke igwe, goziri agozi nke Barbara Barbara, ge nti aririo m ihunanya na ..
(kwuo aha gị na nke onye ị hụrụ n'anya)
Ijikota aru na nkpuru obi, kpuchido ha ka onye obula ghara inweta uzo obi uto na njikọta. Saint Barbara a gọziri agọzi na-ete mmanụ nke (ikwughachi aha) imenyụ ha nke ukwuu infinito ịhụnanya maka ezi ọchịchọ ha siri ike ikpe ziri ezi nke ọgụ na-agaghị ekwe omume na ịgbachitere ndị a hụrụ n'anya ebighi ebi (megharịa aha gị na nke onye ị hụrụ n'anya).
VEH hasR has n'anya abụwo otu n'ime ihe ndị na-akpata ọ joyụ na ihe mgbu ihe kacha bụ ebe ọ bụ na mmalite oge na ruo taa.
Ekwekọghị ịhụnanya nke nna Santa Barbara nye nwa ya nwanyị nke a mere ka ọ mee ihe arụ dịka mkpịsị isi nke nwa ya nwanyị.
Ọ dịghị onye dị mma karịa ya, onye akpọworo asị na-ekwesịghị ime ya, ịghọta ụdị ihe mgbu anyị na-enwetaghị n'ịhụnanya anyị.
Ekpere a nwere ike nyere anyị aka ịhapụ onwe anyị ka ike ghara ịdị ike ka ịhụnanya wee ruo anyị ma ju anyị anya.
Ekpere Saint Barbara gọziri maka nchebe
Saint Barbara, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, onye a gọziri agọzi, nnukwu ike dị ukwuu, ka Chukwu nonyere gị, gị na gị nọnyere n’ụzọ nke ịdị mma.
Gị na mma agha gị meriri m pụọ n'ihe ọjọ, ikpe na-ezighị ezi, anyaụfụ na anya ọjọọ. Site n'ike nke àmụmà, chebe m n'aka ndị iro m, mee ka ọnụ nke egbe m dị ebube ma mee ka ọ bụrụ mmeri.
N’iji iko iko gi na manya gi mee ka aru m na mmuo kpuo ọgụ na mgba.
Nara apụl na ihe ndị a na-ere m dị ka onyinye m na-echeta mgbe niile n’echiche m na n’ụlọ m, ana m arịọ gị, ahapụkwala m ma bịakwute m oge ọ bụla m kwuru na ị ga-agbachitere okwukwe m, ala m, ezinụlọ m na nke m. mgba; na na na njedebe ị na-ewe m otuto dị ka gị.
Nke a bụ ekpere mara mma maka Barbara gọziri agbụ iji chebe Santa.
Ngwá ọrụ anyị nwere ike iji mee ihe mgbe ọ dị anyị mkpa, ekpere na-abụkwa ọta anyị, ọ bụghị naanị megide ihe egwu kamakwa megide ọjọọ niile ndụ anyị ma ọ bụ nke ezinụlọ anyị chọrọ inweta.
Enwere otutu akaebe nke ndị kwere ekwe kwere ekwe natawo site na Santa Barbara n'oge nhụjuanya, mgbe anyị rịọrọ maka nchebe maka onwe anyị ma ọ bụ onye otu ezi na ụlọ ọ ga-aba uru.
Maka ndi iro
Ohu chukwu! pụọ n'akụkụ m, na ndụ m, ndị ọjọọ na nhụsianya ndị ahụ na-ezo.
Abịara m bịakwute gị Santa Barbara ịhapụ ha, kewapụ m iche ka ha ghara imerụ m ahụ, m na-eji okwukwe tie mkpu ma nye gị ndụ m.
Gị, onye nchebe dị ebube nke mmadụ, onye agọziri agọzi nke onye na-akpọku gị yana Onye Kraịst na-emesapụ aka bụ onye meghere obi gị maka ezigbo mmadụ, nye m enyemaka gị, n'ime ya ka m na-esite na ya m ga-apụta n'ọbara nke obi gị, ịtọhapụ onwe m na ha .
Wepụ anyaụfụ na aghụghọ, gbachitere m, m na-arịọ gị ihe ọjọọ na ndị iro, na ihe ọjọọ emetụghị m na ịkpọasị adịghị emerụ m ahụ, zere onye agbata obi ọjọọ na ajọ enyi ahụ, mee ka ndị iro m ghara imebi m, nyere m aka. ịchị onye ọ bụla chọrọ m nke ọma ka m nwee ike merie n'ọnọdụ ọ bụla na-emebi m.
Ekwela ka ha kwusi njem m nke ndi Kristi ma oburu n’iru ha, oku bu ugwo dika ugwo nke ihe ọjọ ha.
Mee ka m bụrụ onye Barbara gọziri agọ site na ihe ọjọọ niile, mee ka m gbapụta m nsọ Barbara gọziri agọzi n'aka ndị iro niile, chebe ndụ m n'ihe ojoo ka m wee bie udo na udo. Maka Jisos na Nwa agbogho.
Jiri ike nke Santa Barbara a kacha gosi maka ndị iro.
Anyị niile nwere ndị iro na n'ụlọ anyị. Anyị na-ahụ ya n’akụkọ banyere Santa Barbara ka nna nke ya wakporo ya ọnwụ.
May nwere ike ị gaghị enwe mmegide dị ka nke a mana ịgaghị atụkwasị ndị iro obi.
Ekpere maka ka ndị iro gbagara Santa Barbara nwere ike ịbụ naanị ụzọ anyị ga-esi nwere onwe anyị pụọ na mkpagbu na ihe egwu.
Dominchịkwa onye mmekọ na-ekwesịghị ntụkwasị obi
Gọziri Santa Barbara gị onye nwere ike ime ka ọtụtụ mmadụ kpezie, mee obere amara maka m, m ga-ahụ ịhụnanya, mee ka obi m dị mma ma bụrụ eziokwu, nwee ịhụnanya, n'ime obi m nwere ike ịbanye ma jupụta m na anụrị, achọrọ m inwe ike imata ezi ihunanya, ezi mmetụta, Santa Barbara, gị onye nwere oke ike na ya, nye m amara ahụ, ka arịrịọ m bịakwute gị, ka m wee nweta ngọzi gị, Santa hụrụ n'anya, nke ịhụnanya zuru oke na-enweghị ụgha, gị na ị nwere omume ọma na ihe niile kwupụtara gị ụwa Biakutenum ka m nye m ohere inara ngozi gi, achoro m oge ozo si gi ka m zite ekpere m.
Ekpere m na-ekpegara Chineke ka o mee ka ndụ m jupụta n’ịhụnanya, juputara n’udo ị nwere ike mee ka ọ bụrụ ọrụ ebube Santa Barbara, a na m arịọ gị ka m nye m ihunanya, nwekwuo ịhụnanya na ịhụnanya karịa, ọ joyụ nke ukwuu, ezi echiche, ezigbo echiche, ezigbo omume, nyere m aka inwe mmeri na ya, ihunanya, ọ ga-abụ maka m dịka nzọụkwụ, okporo ụzọ, Santa Barbara, gị onye ga - eme ihe niile, nye m ma nwee ezi mmetụta nke ịhụnanya bịakwute m, tụkwasị obi ike gị na nke gị ịdị mma, amen.
Somefọdụ ndị chere na ọ bụ omume ịchọ ọdịmma onwe onye nanị na-eme site na nganga nke ịbụ onye e merụrụ ahụ ma ọ bụ onye hapụrụ ya na-akatọ ụdị ekpere a. Mana nke a abụghị eziokwu.
Kpee ekpere ka ị nweta ike n’onwe mmadụ ma ọ bụ ọnọdụ a kapịrị ọnụ bụ omume ịhụnanya na-esite n’obi nkoropụ n’ịchọrọ ọrụ ebube na enweghị ike inweta ya.
Ekpere nke ikwere n’ekwe ga-anata nzaghachi ị na-arịọ, oge ọbụla a rịọrọ gị, Ekpere Saint Barbara a gọziri agọzi dị ike.